Hondo kuUkraine, Kusanaya Zvakanaka KweMvura, Zvopa Kuti Zimbabwe Ipinde Mukanwa Mamupere
Kurume 15, 2022
mamwe madzimai achitenga hupfu kwaMutoko
Veruzhinji munyika vari kuchema chema nekukwira kwemitengo yezvinhu panguva iyo dzimwe nyanzvi dziri kuti izvi zviri kuwedzerwa nekurwiswa kwenyika yeUkraine neRussia.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune veruzhinji munyika sezvo mitemo yezvinhu iri kuramba ichikwira ukuwo kunzvimbo dzakawanda vanhu vasina kana chokunonga muminda nekuda kwekuti mvura iri kurambira mudenga.
Mitengo yezvinhu yanyanya kukwira kubva zvakatanga kudhura mafuta ekufambisa dzimotokari uyewo kushomeka zvakanyanya kwotarisirwa kuita gorosi, mafuta ekubikisa nezvimwe zvichikonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia iyo yatemerwawo zvirango zvakaomarara zvokonzera kusagadzikana pasi rose.
Mitengo yehupfu, shuga nezvimwe zvakawanda yakawedzerwa uye ZESA iri kurongawo kuwedzera magetsi ichiti vanhu vari kubhadhara mari shoma zvotarisirwa kuwedzerazve dambudziko remitengo yezvinhu. Mumwe mugari wemuHarare Amai Rita Chikoto vanoti kukwira kwechingwa kwavashaisa mufaro.
Izvi zvatsinhirwawo naVaNoah Katenhe avo vati panguva iyo mitengo yezvinhu iri kukwira mari dzemihoro dzisiriri kukwira.
Sachigaro wesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe VaTafadzwa Musarara vanoti hondo yekuUkraine yave kupa kuti vawedzerewo mitengo yechingwa nezvimwe.
VaMusarara vatiwo dzimwe nyika dzinorima gorosi dzinogonawo kutadza kutengesa gorosi nekuda kwehondo iyi vachiti izvi zvinogona kukanganisa kuwanikwa kwegorosi munyika iro rinoshandiswa mukubika chingwa nezvimwewo.
VaMusarara vanoti vatotangawo nhaurirano nehurumende yekuti nyika yeZimbabwe ikwanise kugara yatenga gorosi rinodiwa pamwe nekuona kuti nyika yasimudzirawo kurimwa kwegorosi.
Nyanzvi munezvehupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, VaProsper Chitambara vatsinhirawo vachiti pese panongokanganiswa mafambiro ezvinhu zvichizova zvishoma pane zvinodiwa zvinokonzeresa kukwira kwemitengo.
VaChitambara vatiwo hondo iyi ikaramba ichienderera mberi, icharamba ichikanganisa mitengo yezvinhu zvakawanda munyika vakapa muenzaniso wekukwira kwemafuta ekufambisa dzimotokari munyika.
Vanoongorora nyaya dzezvehupfumi VaMasimba Kuchera vatiwo kumiswa kwekufamba kwengarava dzinofanirwa kuuya negorosi zvave kutokonzeresa kukwira kwemitengo yechingwa nezvimwe zvinoshandisa gorosi
Munyori muZimbabwe Congress of Trade Unions VaJaphet Moyo vanotiwo vanoshungurudzika zvakanyanya nekukwira kwemitengo panguva iyo mari dziri kutambiriswa vashandi dzisiri kuchinja.
VaMoyo vatiwo kunyangwe hazvo hondo yekuUkraine neRussia yakonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu munyika vatiwo mitengo munyika yanga yagara iri kukwira hondo iyi isati yatanga.
Kusanaya zvakanaka kwemvura, kushaya simba kwedhora remunyika, chirwere cheCovid-19 uye kusagadzikana kwezvinhu pasi rose nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia kunonzi kuchapa kuti vakawanda munyika nepasi rose vanonge svosve nemuromo.
Chikunguru 03, 2022
VaBiden Vanoparura Chirongwa Chemushandira Pamwe, Che‘Americas Partnership For Economic Prosperity’
WASHINGTON D.C. - Pamusangano wenyika dziri munharaunda yeAmerica, we Summit Of The Americas, wakaitwa muguta reAmerica, reLos Angeles, mutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, vakazivisa nezvechirongwa chavo chitsva chemushandira pamwe munyaya dzezvehupfumi hwenyika dzeAmerica, chinonzi “Americas Partnership For Economic Prosperity”.
VaBiden vakati chirongwa ichi chichabetsera munyaya dzezvehupfumi hwenyika dzeAmerica kuti dzibudirire dzichibva zasi zvichikwidza, kwete kubva kumusoro zvichidzika.
VaBiden vakati nyika dzeAmerica dzinofanirwa kumisa kutambudzika kwevarombo kana pakaita matambudziko ivo vanhu vasina mikana yekuzvibatsira kubuda mumatambudziko aya, uye kuti vakwanisevo kugadzirira kurwisana nerimwe dambudziko ringaitika mune ramangwana.
VaBiden vakati nyika dzenharaunda yeAmerica dzinofanirwa kushanda pamwe chete kuti kudyidzana kwadzo kubudise nzira dzekubatsira panenge paita njodzi huru, vachiti mushandirapamwe uyu uchaunza zvitsva nekubatsira hurumende idzi kuti dziitire vanhu vadzo zvakawanda.
VaBiden vakati vanhu kwese kwese vanotarisira hurumende dzavo kuvapa rubatsiro, nekuvagadzirira mabasa anovapa mihoro yakanaka, kuendesa vana vavo kuchikoro, uye kuchengetedza nzvimbo dzavanogara kuti ivo nemhuri dzavo vagare vakafara mudzimba dzavo, umwe neumwe achiziva kuti anekodzero dzake dzinokosheswa.
Kubatsira hurumende nevanhu vari munharaunda yeAmerica iyi, VaBiden vakakurudzira kupindudzwa kwe mitemo yemabhanga anoshanda munharaunda iyi, kana kuti “Inter-American Development Bank Group”, uye kuwedzera mari inokwereteswa vemabhizimisi akazvimirira.
Nyika dzemushandira pamwe uyu dzicharwisanavo nenyaya yezvemamiriro ekunze, VaBiden vachiti kana vakanzwa nyaya yemamiriro ekunze, vanobva vaona mabasa akanaka uye ane mihoro mikuru, ayo achabatsira kuti nyika dzitange kushandisa simba remagetsi anobva kuzuva asingasvibisi nyika.
VaBiden vakati hapana chikonzero chekuti nyika dzekumadokero dzisava dzisina kuchengeteka, dzisabudirira uye kuti dzisava nehutongi hwejekerere.
VaBiden vakati zvose zvinodiwa munyika idzi zviripo, kusanganisa vanhu vanepfungwa dzakadzika uye vanoda kushanda, vachiti nyika dzemunharaunda iyi dzakazvipira kushanda pamwe chete sezvo vari vanhu vamwe chete.
MAONERO EHURUMENDE YE AMERICA
Dynamos Inogona Kurasikirwa neVatambi neMari Yakawanda neKusaita Zvibvumirano neNguva
Chikwata cheDynamos chatarisana nekurasikirwa negurusvusvu revatambi vacho pasina mubhadharo vakasamhanya-mhanya paine nguva kunyorerana navo zvibvumirano.
Vatambi vane chitsama vechikwata ichi kusanganisira Bill Antonio vasarwa nemwedzi mitanhatu chete muchibvumirano chebasa chavanacho nechikwata chine mukurumbira ichi.
Munyori mukuru wechikwata ichi VaWebster Marechera vanoti ichokwadi kuti pane vatambi vavo vane zvibvumirano zveebasa zvirikusvika kumagumo asi vavasina kudoma nemazita.
Asi VaMarechera vanoti vakamirira kunzwa kumurairidzi wavo Tonderai Ndiraya kuti anoda kuzoshandisa vatambi vapi mwaka unotevera ivo vgadzirira zvibvumirano zveebasa navo.
Mashoko atawana anoti zvibvumirano zveebasa zvaEvans Katema, King Nadolo, Frank Makarati, Ralph Kawondera, Emmanuel Jalai, Arnold Mawadza, Keith Murera, Trevor Mavhunga, Albert Eonde nakaputeni wavo Partson Jaure zviri kuperawo pari kupera mitambo yemwaka uno.
Mutauriri weDynamos VaTinashe Farawo vavimbisa kutumira magwaro anoratidza zvibvumirano zvebasa zvavanazvo nevatambi vavo asi havana kuzokwanisa kuita izvi pataenda pamhepo.
Asi pamutemo, vatambi ava vave kutenderwa kuita hurukuro yebasa nezvimwe zvikwata izvo zvinenge zvichifarira matambiro avo.
Mitemo yenhabvu pasi rese inotendera vatambi kutsvaga rimwe basa kana kwasara mwedzi mitanhatu chete kuti chibvumirano chavo chebasa chipere.
Vatambi ava vakawana mabasa chibvumirano neDynamos chapera, kana kuti chisina kuwedzerwa, Dembare hapana chainowana sezvo panenge pasisina mubatanidzwa pamapato maviri aya.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vatambi ava kunzwa kuti vari kurongei nezve ramangwana ravo.
Vamwe vatambi vaviri veDynamos Shadreck Nyahwa naEmmanuel Paga vari kuTanzania uko varikutsvaga basa kuchikwata cheAzam vachipfuurira zvekare kunoedza raki ravo kuPyramids yekuEgypt. Dynamos inoti ine chibvumirano nevaviri ava chinosvika muna 2023.
Maneja waNyahwa, VaGeorge Deda vanoti vari kutsvagira vatambi ava basa kuti vawane raramo nekuti munhabvu yemuZimbabwe hamuna chirimo.
VaDeda vanoti vanomirira vatambi vese vane zvibvumirano nechikwata nevasina vachiwedzera ivo kuti kune avo vane zvibvumirano zvebasa zvikwata zvavo ndizvo zvinezwi guru mumari inotengwa mutambi.
Dynamos neHighlanders dzinowana rutsigiro rwemari kubva kukambani yeshoroma VaKudakwashe Tagwirei. Asi vatambi veDynamos vanogara vachig’nun'una nkusapihwa mari dzemabonasi panopera mitambo vachinzi vanozopihwa gore rapera.
Parizvino, Dynamos iri kurwisa zvakasimba kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League iri pachidanho chechitatu, poindi imwechete pasi peChicken Inn iyo irikutungamira gungano iri.
Asi Ndiraya arikuchema kuti Nyahwa naPaga vakaenda ikozvino zvinokwanisa kukanganisa hondo yavo yekurwira kutora mukombe wemwaka uno.
Dynamos ine mapoinzi makumi maviri nemana yakaenzana neFC Platinum iyo ine mukombe uri kurwirwa uyu.
Misoro yeNhau, Chipiri, Chikumi 15, 2022
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munyika maberekera ingwe zvichitevera kusungwa kwevatungamiri varo nekupondwa kweimwe nhengo Muzvare Moreblessing Ali.
Vakoti voronga kuramwa mabasa vachiti vari kutambiriswa mutero wembwa sezvo mari yavo isisina chairi kutenga nekushaya simba kwedhora remunyika.
Mumashoko kuvatori venhau, mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagqwa vazivisa kuti mutevedzeri wavo, VaConstantino Chiwenga varoora (Rtd) Colonel Miniyothabo Baloyi.
Vabereki voita maonero akasiyana pamusoro pemari dzechikoro dziri kuwedzerwa kuti vabhadhare kana kuti top-up.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro naGogo Spiwe Kachidza-Mapfumo zvichitevera hurongwa hwekuparura bhuku ravo revana, "A Trip to Zimbabwe With Gogo", uhwo hwavakaita mukupera kwesvondo kuEdmonton kuCanada.
Muchikamu chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutaura nezvizvarwa izvi nezvemaonero azvinoita mhirizhonga yatanga munyika pamberi pesarudzo dza2023. Nhengo dzebato rinopikisa dzeCitizens Coalition for Change dzirikusungwa mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato iri Muzvare Moreblessing Ali.
Varik unze kwenyika munokwanisawo kutumira mavhidhiyo muchipa pfungwa dzenyu pane zviri kuitika munyika.
Chivabvu 06, 2022
Vamwe Vagari vekuMola kuMashonaland West Vonyunyuta neKushungurudzwa Kwavanoti Vanoitwa neVashandi Vanochengetedza Mhuka dzeSango
VaTinashe Farawo, mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority,
Vamwe vagari vekuMola mudunhu reMashonaland West vanoti havasi kufara
nekurohwa kunonzi kuri kuitwa vagari nevanochengetedza mhuka kunyange pasina
Vagari ava vanoti kurohwa zvakaipisisa kwakaitwa mumwe mugari,
VaStephen Machamacha, nevanochengetedza mhuka, veBumi Anti-poaching Unit,
imwe yenyaya dzakawanda dziri kuitika munzvimbo yavo.
Zvinonzi nhengo dzeBumi Anti-Poaching Unit dzinosanganisira vari
muchiuto, avo vanonzi vanochinjana nguva nenguva.
Mumwe mugari wekuMola, ada kungonzi VaShine, anoti vagary vari kushungurudzwa
nevanochengetedza mhuka avo vavati vakaona munhu musango vanomurova
vachimupomera mhosva yekuvhima mhuka zvisiri pamutemo kunyange asina
chaanenge ayinacho chinoratidza kuti muvhimi.
VaShine vanoti vanochengetedza mhuka ava vakafungidzira kuti munhu avaona ari kuvhima mhuka zvisiri pamutemo vanofanirwa kuenda naye
kumapurisa kwete kumuita kafira mberi.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari VaMike Chandiwana, avo vanoti
vanochengetedza mhuka vari kuisa mutemo mumaoko avo nekurova vanhu
Asi mumwe mugari anoita nezvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango, VaObert
Siamilandu, vanoti kunyange vasingawirirane nekurohwa kwevanhu
nevanochengetedza mhuka, vagarii vanofanirwa kutevedzera mutemo
VaSiamilandu vanoti dambudziko rekushungurudzwa nemhuka pamwe
nevanochengetedza mhuka haripere nekuuraya mhuka dzacho idzo vanoti
dzinounza mari munyika nekuda kwevanoshanyira nyika.
Hatina kukwanisa kubata vanochengetedza mhuka munzvimbo yeMola veBumi
Anti-Poaching Unit, asi mutauriri webazi rinochengetedza mhuka pamwechete navo,
reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, ZIMPARKS, VaTinashe
Farawo, vanoti havakurudzire kurohwa kwevanhu asi vanokurudzira kuti vanenge vawanikwa vachivhima zviri kunze kwemutemo vaendeswe
kumapurisa kuti vatongwe nematare.
VaFarawo vanoti asi munhu akawonekwa kuti ari kuvhima zvisiri pamutemo
uye aine pfuti vashandi vavo vanoshandisa pfuti sezvo achikwanisa
kupfura vanhu sezvinomboitika mavanoshandira.
Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemauto VaAlphios Makotore sezvo
vanga vasati vapindura mibvunzo yavakati tivatumire nemusiwe Chitatu.
Asi VaFarawo vanoti mhuka dzakawanda dzinovhimwa zvisiri pamutemo inzou
nezvipembere sezvo vanovhima zvisiri pamutemo vachida nyanga
dzadzo kuti vatengese.
America Yotarisira Kudyidzana neAlgeria kweMamwe Makore Akawanda
VaAntony Blinken vari kuAlgeria
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana nenyika yeAlgeria.
Hukama nekudyidzana pakati peAmerica neAlgeria kwakatanga muna 1795 apo VaHassan Bashaw Dey vaitungamiri yainzi Deylick Algiers vakanyorerana chibvumirano cherunyararo nemutungamiri wekutanga weAmerica VaGeorge Washington.
Kubva panguva iyi, Algeria neAmerica dzakaumba zvibvumirano zvekukdyidzana munyaya dzezvehupfumi nemagariro. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica VaAntony Blinken avo vakashanya kuAlgeria mwedzi wapera vakazeya nenyika iyi kukosha kwakaita nyaya dzekudziviriorwa kwenyika nekudzikama kwezvinhu mudunhu iri kuburikidza nekurwisa vanopfurikidza mwero.
VaBlinken vakarumbidza Algeria nehunyanzvi hwekurwisa vanopfurikidza mwero uye kubatsira vavakidzani vayo nezvekudya nekuunza kudzikama mudunhu reSahel ichiuyawo nemazano anobva muAfrica ekugadzirisa matambudziko anosangana nedzimqwe nyika dzemuAfrica.
Pakusagadzikana kwezvinhu kuLibya, VaBlinken vanoti Algeria izwi rakakosha pakuyedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika iyi.
Algeria yakabudawo nezvibvumirano zvakawanda zvekuyedza kupedza kurwisana muMali zvinonzi Algiers Accords zvinova zviri kurumbidzwa neAmerica.
Nyika yeAlgeria iri kurumbidzwawo nekuchengetedzwa zvinhu zvakakosha mutsika dzevanhu kana kuti cultural sites izvo zvave kupambwa nevanopfurikidza mwero kuti vazvitengese vachitenga zvombo zvehondo.
Gore rapera, America yakabatana neAlgeria nedzihurumende nenyanzvi dzekuLibya, Tunisia neEgypt mukutsvaga nzira dzekuona kuti zvinhu zvakakosha munhoroondo netsika dzenyika hadziputswe nekubiwa uye kuti vanenge vaita izvo vasungwe.
VaBlinken vakaudzawo vatungamiri venyika iyi kuti zvakakosha kuti varemekedze zvitendero zvose uye kusambunyikidzawo vanhu sezvo iri kodzero yavo yekutaurawo mamonero avo pazvinhu zvakasiyana siyana.
Makambani akawanda emuAmerica anonziwo ari kubvunza nezvekutanga mabhizimisi muAlgeria uye ari munyika iyi kare ari kuwanisa vanhu mabasa uye kuunza kudyidzana kwemarudzi akasiyana munyika iyi.
Nyika mbiri idzi dzakashandawo dzose kurwisa chirwere cheCovid-19. America yakapawo Algeria nhomba dzinosvika zviuru mazana makumi matanhatu kana kuti 600 000 uye mibhedha makumi matanhatu nemishanu yemuzvipatara yemhando yepamusoro soro. America inoti iri kutarisira kuramba ichidyidzana neAlgeria.
Mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neAlgeria